खेलकुदमा महिला खेलाडीको सेवासुविधामा किन विभेद ? | Safal Khabar
खेलकुदमा महिला खेलाडीको सेवासुविधामा किन विभेद ?
बुधबार, ०८ मंसिर २०७८, ०८ : ०३
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ खेलकुदमा महिलाको बढ्दो सहभागिता र सफलताले विभेद कम भएको बताउँछन्। ‘खेलकुदमा महिला र पुरुष खेलाडीबीचको विभेद पहिले धेरै हुन्थ्यो। पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता र सफलताले विभेदको अनुपात कम भएको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महिला र पुरुषले पाउने पदक समान हुन्छ। पदकमा भेदभाव हुँदैन। तर, सेवासुविधा र पुरस्कार राशिमा भेदभाव गरिँदै आएको छ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।